Sekuyisikhathi eside Thailand saphela imfihlakalo abaseRussia nezwe okwesabisayo. izivakashi eziningi bayazi kahle kakhulu amasiko endawo futhi uvakashele hhayi kuphela esemqoka resort amadolobha, kodwa futhi eziqhingini ezihlukahlukene, walahlekelwa oLwandle Andaman.
Zonke abake wavakashela izwe lase-Asia, itjheje nasezingeni eliphezulu of service nengqalasizinda athuthukile. Lokho kwakungenza Thailand indawo ezikhanga kakhulu izivakashi. Okwamanje, imizi ezihlukahlukene zezwe evakashela amashumi ezigidi izivakashi ngonyaka. Ukuze ukufika travel ezokungcebeleka ngokunethezeka, ensimini ka Thailand, kunezinhlobo ezingaphezu kuka amathathu zezindiza isimo ezahlukene kanye uya khona.
Thailand, Suvarnabhumi Isikhumulo sezindiza
Kufanele kuqashelwe ukuthi zezindiza ezingaphezu kweziyisishiyagalombili nokuba eziyishumi unesimo sokuba ngamazwe. Kulula kakhulu izivakashi eholide izinqumo, njengoba ungakwazi masinyane uthole cishe kuwo wonke amagumbi zwe. Sekuyisikhathi eside iningi baseRussia elifanayo Thailand - Suvarnabhumi Airport, ke iyona ebaluleke kakhulu futhi kuthatha ivolumu eziyisisekelo umgibeli traffic ezivela emhlabeni wonke. Abavakashi obheke eseholidini e Bangkok kanye Pattaya, ikakhulukazi ukufika ngesikhathi kulesi sikhumulo elihle lase-Asia. Ezinye ezenzayo lapha ukufakelwa futhi zithunyelwe kwezinye izindawo zokungcebeleka Thai, kanye lonke ugu Asian.
Inani endaweni sezindiza square metres abangaphezu kwamakhulu ayizinkulungwane ezinhlanu. isakhiwo Terminal has emabhilidini ezinhlanu nge ingqalasizinda yangaphansi komhlaba futhi evuthiwe. Lapha ungathola cishe konke okudingayo isihambi: yabagibeli ukhululekile, amathilomu ethokomele futhi zokudlela enikeza ukukhetha cuisine ezivela emazweni ahlukahlukene, exchange nokuqasha imoto kanye ehhotela elincane. Eqondiswa kule "isiduli esikhulu" omkhulu Impela wamane, yonke indawo kukhona izimpawu ngezilimi eziningana. Abasebenzi friendly esikhumulweni sezindiza, abakhuluma isiNgisi ezinhle, futhi ihlale ikulungele ukusiza bese ukhomba ukuba efanele.
Ibhodi eyinhloko Thailand Airport itholakala khona emnyango isakhiwo. Lokhu kusiza kakhulu ukufuna ulwazi izindiza. Ngaphezu kwalokho, i-Inthanethi zingatholakala ukubonisa online, ezazihambisana main.
Esitezi komhlaba kukhona umnyango esitimeleni, okungathatha izivakashi maphakathi Bangkok imizuzwana embalwa. Ngesikhathi ophumayo kusukela sakhiwo amatekisi yokupaka namabhasi ezisebenza tinkhombandlela eziningana.
I zezindiza zamazwe e-Thailand
Labo abafuna ukubona isiqhingi exotic, okuyinto idume Thailand, esikhumulweni sezindiza "Phuket" njalo ukuvula iminyango yalo. He kubhekwa wesibili e umgibeli sezimoto kuleli zwe. It ufika izivakashi ezivela emazweni ase-Asia nase-Europe. Kaningi lapha endleleni Ukufakelwa lwenziwa Vietnam nasePhilippines. Phuket Airport kuyinto amakhilomitha amathathu nambili kusukela maphakathi igama elifanayo. Ngokuvamile, kulula ngempela ahlelwe, nakuba ayengazi ubuhle yezakhiwo kakhulu.
izivakashi eziningi dream of a eziqhingini ezincane ezikude futhi enesizungu ebe ephakathi, lapho uhlela uhambo eThailand. Krabi Airport kuzoba Kulokhu, inketho ilungele labo abahambi abanesibindi. Ungomunye emoyeni ezikhumulweni entsha yezwe, wethulwa ukusebenza ngo-2003 kuphela. Krabi Island abakwazi kuphela ukunikela iholidi ipharadesi emabhishi alo eziningi, kodwa futhi yekucala uhambo maphakathi nezwe. abahambi ongumpetha ithunyelwa lapha ezindaweni zokungcebeleka we-Andaman Sea, okuyinto akwaziwa kahle kangaka futhi ithandwe phakathi bezwe kwethu.
Beautiful ngamazwe emoyeni esangweni Thailand ubhekwa Samui Airport. It mncane impela kodwa olunothile kakhulu. isakhiwo ukuphela ngokwayo alinaso izindonga futhi empeleni egxilile ehlathini eliluhlaza.
Kanjani ukukhetha sezindiza zamazwe ngamazwe, uhlela travel ezimele?
AmaRashiya kuvamile kakhulu uhambo ezimele eThailand. Kulokhu, umthwalo uwela emahlombe izivakashi ngokwabo. Lapho ukuthenga amathikithi, bafuna ukungena sezindiza engcono elula kunazo. Kodwa lapha sezindiza e Thailand kungenziwa ngokuthi okungcono? Ukuze siphendule lo mbuzo nakanjani akulula.
Zonke zezindiza zamazwe yezwe ekuhambisaneni nale migomo ududuze esiphezulu izihambi. Ngakho-ke, lapho sikhetha sezindiza akufanele wacasulwa izici zayo, kanye izindawo ezithile. Ukuze Bangkok kanye Pattaya ekahle Suvarnabhumi, isiqhingi elilandelayo kungcono ukundiza nge Phuket noma Samui Airport. Uma wenza kanjalo uhlele diving kanye uhambo olude, ukhululeke ukuthatha izindiza eziya Krabi.
Thailand - akuyona kuphela ezweni elinothile izikhumbuzo zomlando evikelwe amasiko engcwele, kodwa ugcwele izakhiwo zesimanje ingqalasizinda, ezihlanganisa ngokuphelele zonke zezindiza zamazwe.
Umthetho-sisekelo yezindiza Russian "Isikhungo-South"
Electronic nethikithi: kanjani ukuyisebenzisa? Ithengwa kanjani i-, irenti, noma uhlole i-ithikithi indiza?
Kanjani ukubhalisa e-indiza
Ukuxubha amazinyo e-indlu nezobuchwepheshe, lokho kungcono futhi yini umehluko phakathi kwabo
Car Alarm starline a9 - ubuchwepheshe ezintsha sokuvikelwa imoto
Kungani wemithi uyaqonda udokotela umuthi kangcono?
Cat Izintandokazi ethimule yini okufanele uyenze?
Sisebenzisa ama-stencil yezipikili ukwakha isithombe esiyingqayizivele
Venture dolobha: ukuthi kuyini
Valley kaJehoshafati (Vinnytsia esifundeni, eCrimea) izithombe, incazelo